by UKatherine Schulz uRichard
Naphezu kobunzima bawo obukhulu, iNetherlands yayilawula iGunya elikhulu
I-Netherlands lizwe elincinane kumntla-ntshona yeYurophu. Abemi baseNetherlands baziwa ngokuba ngamaDatshi. Njengabaqhubi abaqhubekileyo nabaphicothi-zincwadi, amaDutch alawulwa ngokurhweba kwaye alawulwa yimimandla ende ekude ukusuka kwi-17 ukuya kwe-20 leminyaka. Ifa lolawulo lwamaDatshi liqhubeka lichaphazela i-geography yangoku.
Inkampani yaseDutch East India
Inkampani yaseDutch East India , eyaziwa nangokuthi yi-VOC, yasungulwa ngo-1602 njengenkampani ye-stock joint.
Inkampani ikhona iminyaka engama-200 kwaye yazisa ubutyebi buninzi eNetherlands. AmaDutch asebenzisana neenqweno ezinqwenelekayo ezifana ne-Asian tea, ikhofi, iswekile, irayisi, i-raber, iteksi , i-silk, iingubo, i-porcelain, kunye neziqholo ezinjenge-sinamoni, i-pepper, i- nutmeg kunye ne-clove. Inkampani yakwazi ukwakha iinqaba kwiikholoni, ukugcina umkhosi kunye ne-navy, kunye neemvumelwano kunye nabalawuli bomthonyama. Inkampani ngoku ithathwa njengenyampani yokuqala yelizwe, eliyinkampani eqhuba ishishini kumazwe angaphezu kwelilo.
AmaKoloni ayedaleleyo aseAsia
I-Indonesia: Yaye yaziwa ngokuba yi-Dutch East Indies, amawaka eziqithi zase-Indonesia zamanje zanikezela ezininzi izinto ezifunwa kakhulu kwiiDutch. Isiseko saseDutch eIndonesia sasinguBatavia, ngoku eyaziwa ngokuba yiJakarta (i-Indonesian capital). AmaDutch ayalawula i-Indonesia ukuya ngowe-1945.
IJapan: Abadala baseYurophu abaye bavunyelwa ukuba bathengise ngeJapan, bafumana isilivere yaseJapan kunye nezinye izinto kwiSiqithi saseDeshima, esiseduze neNagasaki .
Ngenxa yoko, amaJapane aziswa kwiindlela zeNtshona eziza kumayeza, izibalo, isayensi kunye nezinye izikhokelo.
UMzantsi Afrika: Ngo-1652, abantu abaninzi baseDatshi bahlala kufuphi neCape of Good Hope. Inzala yabo yavelisa iqela leAfrikaner kunye nolwimi lwesiBhulu.
Izithuba ezongezelelweyo kwi-Asia ne-Afrika
AmaDatshi asungula izithuba zokurhweba kwiindawo ezininzi kwiMpuma yeHlabathi .
UMbindi Mpuma-ngakumbi i-Iran
Ceylon (okwamanje iSri Lanka)
Formosa (okwangoku eTaiwan)
Inkampani yaseDutch West India
Inkampani yaseDutch West India yasungulwa ngowe-1621 njengenkampani yokurhweba kwihlabathi elitsha. Yakha ii-colonies kule ndawo zilandelayo:
ISixeko saseNew York: Elalijongwa ngumhloli wamazwe uHenry Hudson, waseDatshi owathethayo namhlanje eNew York, eNew Jersey, nakwiindawo zaseConnecticut naseDelaware njenge "eNew Netherlands". AmaDatshi asebenzisana nabemi baseMerika, ngokuyinhloko ngoboya. Ngowe-1626, amaDatshi athengi isiqithi saseManhattan kubantu baseMerika kwaye asekela i-fort ebizwa ngokuthi iNew Amsterdam . AmaBrithani ahlasela i-port ebalulekileyo ngo-1664 kwaye amaDutch angaphezulu awanikela. IBritani yaqamba ngokuthi iNew Amsterdam "eNew York" - ngoku isixeko esinabantu abaninzi eUnited States.
I-Suriname : Ngokubuyisela iNew Amsterdam, amaDatshi afumana iSurin ukusuka eBrithani. Eyaziwa ngokuba yiDutch Guiana, izityalo zemali ezithengiweyo zinyuka kwiindawo zokulima. I-Suriname yafumana ukuzimela kwayo eNetherlands ngoNovemba 1975.
Iziqithi ezahlukeneyo zaseCaribbean: amaDatshi ahlanganiswe neziqithi eziliqela eLwandle lwaseCaribbean. AmaDatshi ayalawula "ii- ABC Islands ," okanye i-Aruba, Bonaire, neCuracao, zonke ezisemxwemeni waseVenezuela.
AmaDatshi aya kulawula iziqithi zaseCaribbean zaseSaba, eSt. Eustatius, kunye nesiqingatha esinqununu sesiqithi saseSint Maarten. Isixa solawulo lwaloo siqithi ngasinye sitshintshile amaxesha amaninzi kwiminyaka embalwa edlulileyo.
Amaqela alawulwa yiDatshi enyakatho-mpuma yeBrazil naseGuyana, ngaphambi kokuba abe isiPutukezi kunye neBritani, ngokulandelana.
Ukuhla kwezoNkampani zombini
Iingeniso ezixhamlayo zeeNkampani zaseDutch East neWest India zagqitywa. Xa kuthelekiswa namanye amazwe aseYurophu angenasiphelo, amaDatshi ayenempumelelo encinci ekuqinisekiseni abemi bawo ukuba baye emakoloni. Ubukhosi bulwa nemfazwe emininzi kwaye yalahlekelwa yintsimi ebalulekileyo kumazwe aseYurophu. Amatyala eenkampani avuka ngokukhawuleza. Ngekhulu le-19, ubukhosi obusenyongweni baseDatshi bubekwe ngumbuso wamazwe aseYurophu , njengeNgilani, eFransi, eSpain nasePortugal .
Ukugxeka kobukhosi baseDatshi
Njengamazwe onke aseYurophu angama-imperialism, amaDatshi ajongene nokugxekwa kakubi ngezenzo zabo. Nangona iikholoni zenza amaDutch amcebile kakhulu, zaye zityholwa ukuba zizigqila zendawo yokuhlala kunye nokuxhaphazwa kwemithombo yemvelo yamacoloni.
Ubukhosi bamaDatshi obuMmandla woLhwebo
Ubukhosi bobukhosi bamaDatshi bubukhulu becala kunye neembali. Ilizwe elincinci lakwazi ukuphuhlisa ubukhosi obukhulu, obuphumelelayo. Iimpawu zenkcubeko yaseDatshi, njengelwimi lwesiDatshi, isaphila kwimimandla yase-Netherlands yangaphambili nekhoyo. Abafuduki abavela kwimimandla yabo baye benza iNetherlands ilizwe elininzi kakhulu, elinomdla.
Ama-Boxer Greatest Of All 50
Inkcazo ye-Binary Acid
Imfazwe Yehlabathi II: I-Admiral Raymond Spruance
Ngaba ufuna iNdlela entsha? Zama ukuthatha amehlo akho ukukhupha ibhola
Kuphi ukufumana iiKharathithi zokuThola iiNgcali eziPhambili
Umxholo kaNietzsche othi 'Intando Yamandla'
Imbali yeNobel Prizes
Iifayile zePunk eziphezulu kunye nezobugcisa beMindeni kunye nabantwana
Indlela yokuguqulela amagama e-Dinosaur
Ngowe-1961 Ihlabathi lase-US I-Figure Skating Team Photos
Ubambe isithethe sePet Farewell
"Ukutya isidlo" kukuthi "iDinner": Kulula ukukhumbula nokulula ukudibanisa